FIFA Beach Soccer World Cup Paraguay 2019 – News – Tahiti qualify for fifth consecutive Beach Soccer World Cup – Sports News9- FIFA Beach Soccer World Cup Paraguay 2019 - News - Tahiti qualify for fifth consecutive Beach Soccer World Cup
June 23, 2019 Sports News 9Comment(0)
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ရဲ့ ဒီရာသီ လာလီဂါပြိုင်ပွဲမှာ ကျဆင်းသွားခဲ့တဲ့ ခြေစွမ်းတွေက တကယ်ကို မယုံကြည်နိုင်စရာကောင်းလှပါတယ်။ ရာသီအစမှာ အမှတ်ပေးဇယား အလယ်လောက်ထိကို ကျဆင်းသွားခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာလည်း ရလဒ်ပိုင်း ပြန်လည်တည့်မတ်လာနိုင်ခဲ့ပေမယ့် မလိုအပ်တဲ့ ရမှတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေကတော မြင်တွေ့နေရဆဲပါ။ အမှတ်ပေးဇယားကို ဦးဆောင်နေတဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့ ရမှတ် ၁၅ မှတ်ထိကွာဟခဲ့ပြီး အမှတ်ပေးဇယား အဆင့် ၃ နေရာမှာသာ ရပ်တည်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းကို ဘယ်လိုရလဒ်တွေက အခုလိုဖြစ်စေခဲ့တာလည်း သုံးသပ်ကြည့်ရအောင်ပါ။ စပြောရမယ်ဆိုရင် ကစားသမားအပြောင်းအရွှေ့ကနေစကြရအောင်ပါ။ဒီရာသီရီးရဲလ်အသင်းကနေ ကစားသမား ၉ ဦးထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီး ထိရောက်တဲ့အစားထိုးမှုကို ရီးရဲလ်အသင်းပြန်လည်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုထွက်ခွာသွားခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေထဲမှာ ဂျိမ်းရိုဒရီဂွတ် ၊ မိုရာတာ နဲ့ ပီပီတို့လို ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက အသင်းကို အကြိုးပြုခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေ ပါဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ ရိုဒရီဂွတ် နဲ့ မိုရာတာတို့ကတော့ အသင်းပြောင်းရွှေ့ချင်နေတဲ့ […]
LaVar Ball Calls Lonzo’s Lakers Debut ‘Worst Game Ever’
LaVar Ball Calls Lonzo’s Lakers Debut ‘Worst Game Ever’ | SI.com Top EventsNBANFLMLBNHLNCAAFNCAABSoccer Search © 2017 Time Inc. All Rights Reserved. Source link قالب وردپرس
Golf | July 17, 2017 9:05 AM HKT Bryson DeChambeau producedabirdie blitz on the back nine to clinch his first PGA Tour title at the John Deere Classic on Sunday. The 23-year-old birdied six holes coming home, including the final two holes at TPC Deere Run to leapfrog Patrick Rodgers and takeamaiden PGA […]
Former Matilda's brutal verdict of Australia's Women's World Cup campaign
4:56 AM ET Malika AndrewsESPN LOS ANGELES – Eric Bledsoe …
Total Video Views: 777 Eddie Mercado & Fraser Coffeen of …